"गोही" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"गोही" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
गोही (सम्पादन गर्ने)
०७:५३, ४ अगस्ट २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन
३ bytes added , ३ वर्ष अघि
वि. म.: हिज्जे ठीक (-बंगलादेश +बङ्गलादेश)
१०:४८, १७ मार्च २०१६ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
BRPever (कुरा गर्ने • योगदान)
(Cat-a-lot: Moving from Category:जनावर to Category:जनावरहरू)
०७:५३, ४ अगस्ट २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (वि. म.: हिज्जे ठीक (-बंगलादेश +बङ्गलादेश))
'''गोही''' एक पानी र जमीन दुबै ठाउँमा बस्न सक्ने [[सरीसृप]] समुहको जीव हो । यसलाई प्राचिन [[डाइनोसर]] जीवको प्रजाती मानिएको छ । गोहीको दाँतहरू उल्टो फर्केका कारण यसले कुनै पनि जीवलाई दाँतले समाती सकेमा छोड्ने सम्भावना कम नै हुन्छ । त्यसैले यसलाई सबै भन्दा खतरनाक जनावरको रूपमा लिन सकिन्छ । गोहीलाई कुनै कुनै ठाउँमा ग्राहक, मगर मच्छ, नाका, घडियाल इत्यादी फरक फरक नामले पनि चिनिन्छ ।
पहिले गोही दक्षिण एसियाका [[पाकिस्तान]], [[भुटान]] र [[बंगलादेशबङ्गलादेश]]मा पनि पाइन्थे । तर, अहिले त्यहाँबाट लोप भइसकेका छन् । हाल विश्वमा नेपाल र भारतमा मात्रै गोही उपलब्ध छन् । खास गरेर नेपालको [[कोशी नदी]], [[कर्णाली नदी]], [[नारायणी नदी]]मा गोहीहरू देख्न सकिन्छ भने [[भारत]]का धेरै नदीहरूमा गोही देख्न सकिन्छ । गोहीहरू धेरै प्रजातीको हुन्छन् ।
गोही प्रकृतिकै अति संवेदनशील प्राणीमा पर्छ । यो प्राकृतिक परविर्तन अनुसार अनुकूल बन्न जान्दैन । त्यसैले मानवीय चाप र प्रदूषणले सजिलै मर्ने गरेको छ । गोहीले पानीभित्रको इकोसिस्टमलाई सन्तुलनमा राख्छ । तर, नदीमा माछा मार्न विष हाल्ने, करेन्ट लगाउने र माछा मार्न जाने क्रम बढेकाले यसको बासस्थान संकटमा छ ।
अन्तरमोहडा सम्पादक, प्रबन्धकहरू
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/663188" बाट अनुप्रेषित